CENI: Tsy misakana ny fikarakarana ny fifidianana ny fitsapan-kevi-bahoaka.
ACTUALITE/ Politique/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA 1 Commentaire sept 18, 2017
Ho fametrahana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018, ao anatin’ny fahatoniana niroso tamin’ny fanatsarana ny lisi-pifidianana, ny fanamafisana ny tomponandraikitra ao aminy sy ireo mpiantsehatra manodidina ny fifidianana ny CENI. Nambaran’ny Filohan’ny CENI, Hery RAKOTOMANANA fa efa mandeha araka ny tokony ho izy ny fikarakarana ny zotra-pifidianana.
Fitsapan-kevim-bahoaka. Araka ny fanazavana hatrany, mibanjina ny fifidianana Filoham-pirenena foana ny CENI na tsy mbola misy aza ny filazana amin’ny fomba ofisialy ny hisian’ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fanitsiana ny lalam-panorenana.
Fanamarinana ny lisitry ny mpifidy. Folo tapitrisa no mpifidy vinavinaina handray anjara amin’ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Efa nisy ny fanavaozana ny lisitra sy fanentanana ireo olona tokony hifidy. Taorian’ny fampahafantarana ny tombon’ezaka momba ireo asa nirotsahan’ny CENI nandritra ny fotoam-piasana nodiaviny (PTP), asa manaraka hirosoan’ny vaomiera misahana manokana momba ny fifidianana fanamarinana ny lisitry mpifidy mba hisian’ny mangarahara.
‹ MANDA SEA FOOD: Hisokatra amin’ny fomba ofisialy rahampitso ny “restaurant” vaovao.	› MARATHON INTERNATIONAL DE TANA: Une dizaine de sociétés soutiennent le MIT.
sept 22, 2017	@ 10:08:52
Avy aiza vola hoentina hanantaterahana izany fifidianana lalam-panorenana izany ?